बुढा : “अलिअलि मान्छे आएकै छन् त । यस्तो बेलामा पनि घ्याप्प नाफा खोजेर हुन्छ ।”
बुढी : “सौ दुई सौ फाइदा लिएर बेच्नै पर्‍यो । सटरको भाडा तिर्न पनि पुग्दैन ।
पसलमा देवताको तस्विर राखेकै छन् । अबिर केशरी पोतेकै छन् । जौ तिल नैबेद चढाएकै छन् । यसरी पूजाआजा गर्दा त मान्छे भए, उहिल्यै प्रशन्न भइसक्थ्यो । पोहोर परार त बिक्री राम्रै थियो । यसपटक समय परिस्थिति बेग्लै भयो । पहिले दशैं आउनुभन्दा महिनौं अगाडि पसलमा मान्छेको घुईँचो हुन्थ्यो । एउटै कपडामा हजार दुईहजार नाफा हुन्थ्यो । पसल धान्न बुढा बुढीलाई भ्याई नभ्याई हुन्थ्यो । चाडबाडको समयमा छोरा बुहारीले समेत सघाउँदा पनि भ्याइन्नथ्यो । महेश्वरले सटरको भाडा नतिरेको पनि तीन महिना भयो । यस अघि पनि बल्ल बल्ल गरेर तिरेको थियो । ब्यापार न्यून छ । मान्छेहरुमा त्रास छ । दशैंको रौनक पहिले जस्तो छैन । एकदिन अलिकति नाफा बढायो । अर्को दिन छैन ।
ग्राहकहरु आउँछन् र जान्छन् । उतिसारो समय दिएर कपडा छान्न पनि मन पराउँदैनन् । भाउ घटाउँछन् । उनीहरुले भनेको दाममा दिने हो भने साँवा पनि उठ्दैन ।
महेश्वरको कपडा पसलमा विभिन्न डिजाइन र साइजका रेडिमेड कपडाहरु बिक्रीका लागि राखिएका छन् ।
एउटा मानिस पसलमा छिर्यो र झुण्ड्याई रहेको टिसर्टको मूल्य सोध्यो ।
“ह्याँ ....हजार पो लेख्या रैछ।”, कस्तो महङ्गो। उसले मुख बिगार्‍यो र हिँड्यो । त्यसको दुई घण्टासम्म पसल भित्र कोही छिरेनन् । दुईघण्टा पछि भने एउटी महिला देखा परिन् । उनल झुण्ड्याईरहेको कुर्थातिर नजर लगाइन् ।
“यसको सल कस्तो छ दाइ ? कुन कुन कलरमा छ ? ”
महेश्वरकी बुढीले रातो र नीलो रङ्गको कुर्था सुरुवाल निकालिन् । सलहरु पनि निकालिन् । अलि टाडैबाट देखाइन् । ती महिलाले अरु पनि देखाउनुस् न भनिन् पन्ध्रवटा जति कुर्थासुरुवालका सेटहरु फिजारिइसकेका थिए । कम्तिमा पनि एउटा पिस त बिक्री होला भन्ने आश थियो तर अहँ एउटा पनि बिक्री भएन ।
बिक्री गर्न ग्राहकको चित्त बुझाउनै पर्‍यो । तर चित्त बुझाउन पनि गाह्रो छ । चित्त बुझाईहाले पनि बार्गेनिङ्ग गर्छन् । फिक्सड् रेट हो भन्दा पनि आधा मूल्य घटाउन खोज्छन्। दिउँसभरी पसल कुर्दा पनि एकजोर जिन्स पाइन्ट र दुई जोर लेहेङ्गा मात्र बिक्यो ।
भाडा महिनै पिच्छे खप्टिँदै गईरहेको छ । ब्यापार राम्ररी नभएपछि खल्तिको पैसा हालेर भएपनि भाडा तिर्नै पर्छ ।
“ ब्यापार छैन ।”, महेश्वरकी बुढीले भनिन् । यसो भनिरहँदा उनको अनुहार कालो निलो थियो ।
“ कपडा हेरौं कि भनेर आको । दशैं लागिसक्यो ।”, घरबेटीले कुरा मोडिन् ।
“ हुन्छ हेर्नुस् न ।”, महेश्वरकी बुढीले जवाफ फर्काइन् । उनले दश हजार मूल्य जतिका कपडा छानिन् ।
“ भाडामा मिलाउँला नि है ।”, घरबेटीले भनिन् ।
धन्न धन्न यसपटक घरभाडा तिर्नु परेन । दशैंलाई खर्च गर्न अलिकति पैसा हुने भयो ।
होलसेलवाला अएर सोकेश, दराज र अरु सामान उठाएर लाने हो कि ? महेश्वरलाई यस्तै यस्तै कुराको चिन्ता छ । तैपनि उसले सटर बन्द गरेन । ग्राहकको प्रतिक्षा गरिरह्यो ।